Kambodza: Dokambarotra finday tsy mandeha ilalana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2010 6:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Nederlands, Français, বাংলা, ភាសាខ្មែរ, English
Voatsikeran'ny mpiserasera maro ho mandrisika ny tanora hanao fihetsika tsy mety ny dokambarotra navoakan'ny mpanome tolotra antso finday kambojiana vao haingana izay. Mampiseho andian-tanora maka ny sarin'ny namany ary manaparitaka izany amin'ny namany amin'ny alalan'ny aterineto ny dokambarotry ny CellCard. Mihevitra ilay orinasa amin'ny alalan'izany dokambarotra izany fa manasongadina ny halakin'ny aterineto atolony. Saingy toa tsy fantatrity orinasa ity ny andraikiny amin'ny fandrisihana ny tanora hanosihosy ny fiainana manokan'ny namany.
Piseth Mao, mpamaham-bolongana sady manampahaizana manokana momba ny fifandraisana ao amin'ny Women's Media Center of Cambodia (Ivom-pampahalalam-baovao ho an'ny vehivavy eto Kambodza), no nampaneno ny ahiahiny sady manohitra ity dokambarotra ity ka manolo-kevitra ny handrarana ilay rindran-tsary. Nampirisihany ny orinasa hamoaka hafatra tsaratsara kokoa ho an'ny olona indrindra fa ny tanora raha tiany ny hanasongadina ny tolotra fanomeny. Ao amin'ny bolongany moa i Piseth no mampiasa ny zony hiteny an-kahalalahana hanala ity “faingo” (rindran-tsary dokambarotra) ity:
Efa nisy ihany koa ny olana efa nitranga taloha tamina dokambarotra navoakan'ny orinasa-na mpivarotra môtô izay nanivaiva ny hasin'ny vehivavy.
Tetsy ankilan'izany dia vao nandrara sarihimetsika mitohy amin'ny fahitalavitra mitondra ny lohateny hoe “Mpifankatia Hafahafa” ny fanjakana, tantara izay hahitana vehivavy manja iray atao lavanty ka ny tonombola voalohany dia iray tapitrisa dôlara. Azo raisina ho fanimbana ny hasin'ny vehivavy kambojiana ihany ilay tantara raha jerena amin'ny solomaso mainty. Nefa misy ihany koa no mijery izany fandrarana izany ho toy ny fanohintohinana ny fahalalaham-pitenenana ho an'ny mpamokatra sarimihetsika. Mampifandray ity trangam-pandrarana ity amin'ny nataon'ny fitondrana teo aloha nandrara ny fampisehoana ara-kolontsaina hafa ry zareo. Ohatra, hira madinika iray miresaka moanina bodista mikasika sy manoroka sipa iray sy rock arahina dihy iray, “Where Elephants Weep,”( Ny [toerana] itomanian'ny Elefanta) izay ahitana moanina manao fihetsika tsy mendrika dia samy efa voasivana avokoa. Ny nentin'ny fitondrana nanamarinana ny fandrarana moa dia noho ny fanajana ny fombam-piaraha-monina sy ny moanina bodista.
Raha azo ekena ihany amin'ny lafiny sasany ny fandrarana ny hira sasany dia tokony hifanaraka amin'ny fahalalaham-pitenenana izany ary tokony hijery ny tonony (votoaty) sy ny tanjony (ao amin'ny tononkira) ny fitondrana fa tsy hanonona ny hoe fomban-drazana tsara sy ny fiarovam-pirenena fotsiny izay mety hiteraka tsikera mavaivay amin'izay mety hisamborana noho ny fanalana baraka, fanomezana vaovao diso na fanentanana noho ny tsy fitoviana hevitra amin'ny politikan'ny fitondrana.